Moovit: Bus, Rail, Timetables, Maps 5.35.0.416 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.35.0.416 လြန္ခဲ့ေသာ2လက
Application မ်ား ေျမပံုမ်ား & လမ္းညႊန္ျခင္း Moovit: Bus, Rail, Timetables, Maps
Moovit: Bus, Rail, Timetables, Maps ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Moovit အားလုံးသင့်ရဲ့မြို့ပြမိုဘိုင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီးဘို့တ app ကိုပါ! 🚍🚇🚘🚴♀️
🏆 Dailymail - "ဤသည်ခရီးသွား App ကိုအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသုံးပြီးမည်သူမဆိုများအတွက် godsend ဖြစ်ပါသည် - ။ ဘတ်စ်ကားအချိန်ဇယားမှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ဆုံးသတင်းများအဖြစ်ဗြိတိန်တလွှားမြို့ရွာတို့အဘို့အလွန်ကြီးစွာသောလမ်းကြောင်း-စီမံနှငျ့အတူ" 🏆
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမြို့ပြလူနေမှုအရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျစီး-sharing Uber🚘ကဲ့သို့bikes🚴♀️ကိုသုံးပါ, အtrain🚆, မြေအောက်ရထား / မြေအောက် / tube🚇, bus🚍, အလင်းrail🚈, ferry⛴️သို့မဟုတ်မက်ထရိုစီးပဲဖြစ်ဖြစ်, အကောင်းဆုံးမြို့ပြ mobility သတင်းအချက်အလက်ရတဲ့အရေးကြီးသည်။ Moovit အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အထိရောက်ဆုံးလမ်းအတွက် B ကိုမှအမှတ် A မှသင်တို့ကိုလမ်းညွှန်ထားပါတယ်။ , ရထားနှင့်ဘတ်စ်ကားကြိမ် Get မြေပုံ, သင်ယုံကြည်မှုနှင့်သင်၏ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်နိုင်အောင်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အတူဆိုက်ရောက်ကြိမ်နေထိုင်ကြသည်။ သင်အကြိုက်ဆုံးလိုင်းများများအတွက်အရေးပါသတိပေးချက်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပြတ်တောက်ကိုရှာပါ။ အကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းကိုဘတ်စ်ကား, မီးရထား, မက်ထရို, စက်ဘီးသို့မဟုတ်သူတို့ထဲကတစ်ဦးပေါင်းစပ်ခြင်း၏ခြေလှမ်း-by-step လမ်းညွန်ရယူပါ။
Moovit 2016 ၏က Google Play ရဲ့အကောင်းဆုံးဒေသခံ App ကိုအမည်ရှိထားပြီးအဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ -! အမေရိကန်, CA, ဟောင်ကောင်နှင့်ပိုပြီး
🌍 Moovit ကမ္ဘာအနှံ့ 2800 ကျော်မြို့ကြီးများအတွက် 400 ကျော်သန်းသည်အသုံးပြုသူများလမ်းညွှန်ထားပါတယ်။
သင်တို့ရှိသမျှသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး options များပေါင်းစပ်နှငျ့သငျတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိမှုနှင့်အတူအကောင်းဆုံးလမ်းကြောင်းပေး🚍 ခရီးအစီအစဉျ ။
🔔 တိုက်ရိုက်ဦးတည်: သင်ခရီးသွားလာအဖြစ် တိုက်ရိုက်လမ်းညွှန်မှုနှင့်အတူခြေလှမ်း-by-step လမ်းညွန် Get: သင်၏၏ရောက်ရှိချိန်ကြည့်ရှုရန်, သင်စောင့်ဆိုင်းနေတာဘယ်လောက်ကြာ, သင်သည်သင်၏ဘူတာရုံကိုလမ်းလျှောက်ဖို့လိုအပ်အတိအကျဘယ်လောက်ရှည်လျားကိုသိရ လိုင်းနှင့်မည်မျှမှတ်တိုင်များကျန်ရစ်နေကြပါတယ်။
✔️ ရီးရဲလ်အချိန်ရောက်ရှိမှု။ ဘတ်စ်ကားနဲ့ရထားပေါ်တွင်နေရာချထား GPS စက်ပစ္စည်းများအားမှတိုက်ရိုက်ယူရှိကြသည့် Real-time ဆိုက်ရောက်နောက်ဆုံးသတင်းများ, ကြည့်ရှုပါ။
⌚ ရီးရဲလ်အချိန်သတိပေးချက်။ ထိုကဲ့သို့သောအရေးပေါ်သို့မဟုတ်မမျှော်လင့်ဘဲပြတ်တောက်, နှောင့်နှေး, ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုအသစ်ဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပိုပြီးအဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုသတိပေးချက်ကိုလက်ခံရရှိခြင်းဖြင့်ရှေ့ဆက်အချိန်ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားပါ ...
📄 အသုံးပြုသူများအစီရင်ခံစာများ။ Moovit ရဲ့အသုံးပြုသူများအကြှနျုပျတို့သညျသူတို့ဧရိယာထဲမှာပေါ်မယ့်အဘယ်သို့သောအကြောင်းအားလုံးအနီးအနားမြင်းစီးအကြောင်းကြားနိုင်အောင်ဘူတာလိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အချိန်ဇယားနှင့်အတူတွေ့ရှိရကိစ္စများသတင်းပို့ပါ။
🚩 အကြိုက်ဆုံးလိုင်းများ, ဘူတာနှင့်သောအရပ်တို့ကိုမ။ သင်တို့ရှိသမျှအချိန်ကိုစီးနှင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုလိုင်းများ, ဘူတာနှင့်သောအရပ်တို့ကိုမရန်လွယ်ကူ access ကိုရယူလိုက်ပါ။ / လျှင် Plus အား, သင့်ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်ရထားအချိန်ထိခိုက်နေသည်အမှု၌သင်၏အကြိုက်ဆုံးလိုင်းများမှစသောအပြောင်းအလဲရှိပါတယ်သည့်အခါ Real-time updates များကိုရ!
🚴 စက်ဘီးစီးလမ်းကြောင်း။ ဘတ်စ်ကား, မြေအောက်ရထား, ရထား, သို့မဟုတ်မက်ထရိုခရီးစဉ်အစီအစဉ်များအပြင်စက်ဘီးလမ်းကြောင်းများရယူပါ။ သငျသညျစက်ဘီး (ဥစ္စာသို့မဟုတ် shared) စီးပါလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရထားသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားပါဝငျသောလမ်းကြောင်းစီစဉ်နိုင်ပါတယ်။
စက်ဘီး docking station များ Real-time အတွက် updated နေကြသည်။
🗺️ Maps ကိုရှုမြင်။ အားလုံးဘူတာ, လမ်းကြောင်းများ, နှင့်မြေအောက်ရထားသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားမြေပုံပေါ်တွင်လိုင်းများကြည့်ရှုပါ။ ထို့အပြင်, မြေပုံများကိုသင်အော့ဖ်လိုင်းနေသည့်အခါအဘို့အ PDF ဖိုင်ရယူရန်ဒါမှမဟုတ်မြေအောက်ရထားပေါ်တွင်မြေအောက်အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အားလုံးအဓိကမြို့ကြီးများအတွက် Moovit နှင့်အတူစီးမျောလိုက်ပါသွား:
Moovit အားလုံးအဓိကအကူးအပြောင်းကို support:
• TFL - ဘတ်စ်ကား, Tube, DLR, Overground, ကြိုပို့ယာဉ် (မြစ်ဘတ်စ်ကား), Tfl ရထား, ဓါတ်ရထား, နည်းပြ
•အမျိုးသား Express ကို
Stagecoach နှင့်ပိုပြီး• ...
• Dublin ဘတ်စ်ကား
• Kenneally ရဲ့ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပိုပြီး ...
လန်ဒန်မြို့ရှိ Santander Cycle •
• Glasgow အတွက် Nextbike
•ဒေလီ: ဒေလီမီထရို (DMRC), ဒေလီဘတ်စ်ကား (DTC), မြောက်ပိုင်းမီးရထား (ရော်ဘာ)
•မွန်ဘိုင်း: မွန်ဘိုင်းက Metro (M.M.R.D.A), အားလုံးဘတ်စ်ကား: အကောင်းဆုံး, NMMT, KDMT, VVMT, MBMT, KMT, TMT, ကူးတို့များနှင့်ပိုပြီး
•ဘန်ဂလို: Namma Metro, B.M.T.C (ဘတ်စ်ကားနှင့်မက်ထရိုလမ်းခွဲလမ်းကြောင်းများ), တောင်ပိုင်းအနောက်တိုင်းမီးရထား
•ချင်နိုင်း: ချန်နိုင်းက Metro ရထား, ရှိသမျှဘတ်စ်ကား - တဲ့ Metropolitan ပို့ဆောင်ရေးကော်ပိုရေးရှင်း (MTA)
• Ahmedabad: A.M.T.S, ဘတ်စ်ကား Rapid ပို့ဆောင်ရေးစနစ် (BRTS), V.T.C.O.S
• MRT, LRT, ဘတ်စ်ကား, လမ်းရထား, cable ကိုကားတစ်စီး & လွန်းဘတ်စ်ကား။ ပေးဝန်ဆောင်မှု:
• Go ကို-ရှေ့ကိုစင်္ကာပူ
သငျသညျစီး, ငါတို့ပဲ့ပြင်! 💪
Moovit: Bus, Rail, Timetables, Maps အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Moovit: Bus, Rail, Timetables, Maps အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Moovit: Bus, Rail, Timetables, Maps အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Moovit: Bus, Rail, Timetables, Maps အား အခ်က္ျပပါ
Moovit: Bus, Rail, Timetables, Maps ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Moovit: Bus, Rail, Timetables, Maps အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.35.0.416
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.company.moovit.com/terms/?utm_source=googleplay&utm_medium=Organic
လက်မှတ် SHA1: C5:6A:BF:7C:68:90:11:3E:D6:65:4E:38:1E:2A:17:97:DA:3E:7F:6A
အဖွဲ့အစည်း (O): Tranzmate
Moovit: Bus, Rail, Timetables, Maps APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ